မသီတာထွေး အမှု အပြီးသတ်ကြားနာ | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| June 15, 2012 | Hits:8,658
| | အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွာတရွာ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - နိရဉ္စရာ)
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ုLu June 15, 2012 - 8:43 pm	ပြစ်မှု့ကျူးလွန်သူများအနက် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်ပြီး တစ်ဦးသေသွားရတာဟာ အဲ့ဒီတစ်ဦးထဲကို အပြစ်ပုံချပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းချင်လို့ ကျန်တဲ့သူ နှစ်ဦးက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် လိုက်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ။ တရားသူကြီးတွေ ဒါကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Reply	knifes June 17, 2012 - 8:49 am	I agreed with you.
To ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးကြည်,
All of people in Myanmar,We watch your action,please follow the Law.Law is Law.!!!!!
Reply	bosaw tck June 15, 2012 - 10:19 pm	ယခုလိုမိမိလူမျိုးအပေါ်အနိုင်အကျင့်အပြုအမူပြုနေခြင်းများအားထပ်မံမဖြစ်ပွားရအောင်နိုင်ငံ
မှဥပဒေများကိုတိကျခိုင်မာစွာပြဌာန်းသင့်ပါသည်။ယနေ့ Sky NET ရုပ်သံလိုင်းတွင် တွေ့ဆုံ
များကြုံတွေ့နေကြရပါသော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပြည်နယ်အတွင်း မှလက်
Reply	မမ June 16, 2012 - 11:49 am	တောင်ကုတ်မြို့လူသတ်မှုကိုလည်းစုံစမ်းပေးကြအုံးလေဒါမှတရားမျှတမှုရှိမှာပေါ့။
Reply	shangyi June 16, 2012 - 3:34 pm	ဒီကောင်တွေကို သေဒဏ်မပေးလို.ကတော့ တရားသူကြီးတွေ ငါနဲ.တွေ.မယ်။
Reply	June nge June 16, 2012 - 11:47 pm	ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေကိုအလျှော့ပေးလိုက်လို့ကတော့ဒင်းတို့ကကမ်းတက်တော့မယ်တို့ဗမာတွေစည်းလုံးဖို့လိုတယ်ရခိုင်ဆိုတာလည်းတို့တိုင်ရင်းသားသွေးသားပါဘဲလုံးဝတော့မခံချင်ဘူးအမှုန့်ချေခြင်နေတယ်….ဒါဘဲ
Reply	သန့်ဇင် July 14, 2012 - 12:54 am	အရေးဆုံးက ဘာလဲ ဆိုတာ သိအောင် အရင်ကြုံးစားသင့်ပါတယ်